ISAKY NY FARITRA NY FANKALAZANA NY 08 MARTSA MIOMPANA AMIN’NY FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA SY NY FIZAKAN-TENAN’NY VEHIVAVY :
Vehivavy mizaka tena sy miarin-doha ao anaty fikajiana ny tontolo iainana ! Isaky ny faritra no hatao ny fankalazana ny fetin’ny 08 martsa amin’ity taona ity mba hisorohana ny mety hiparitahan’ny valan’aretina Covid-19 izay mbola mihaodihaody eto amintsika. Tsy misy ny fihaonam-be iarahana fa samy mankalaza izany ny isaky ny faritra 22 izay isan’ny lohahevitra miavaka ny sehatr’asa miaro ny tontolo iainana noho ny faharavana hita sy tsapa ankehitriny eo amin’ity sehatra iray ity. Fambolen- kazo, fanentanana amin’ny fizakan-tenan’ny vehivavy sy ny fikajiana ny tontolo iainana no iompanan’ny fankalazana. Mandritra ny herinandro, izany hoe 01 Martsa ka hatramin’ny 06 Martsa dia handeha hitsidika ny faritra, hanome fanampiana ary hankahery ny vehivavy sy ireo fikambanam-behivavy isaky ny renivohim-paritany ny vadin’ny Filoham-pirenena. Any DIANA kosa, any Antsiranana izy ny 07 sy ny 08 Martsa 2021 hanao ny nofon-kena mitam- pihavanana sy ny fambolen-kazo manokana, izay iarahana amin’ireo vehivavy sy fikambanam-behivavy ao amin’ireo Distrika mandrafitra ny faritra DIANA. Tsy hisy ireo solon-tena avy any amin’ny faritra hamonjy any an-toerana fa ny vehivavy ao anatin’ny faritr’i DIANA sy ireo Minisitra vehivavy ary ireo vadina Minisitra vehivavy ary olona vitsivitsy no hifanotrona amin’ny vadin’ny Filoham-pirenena amin’izany. Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia hihavaka tsy toy ny isan-taona ny fankalazana ny 08 Martsa amin’ity taona ity ! Samy manao fankalazana izay miompana amin’io lohahevitra io avokoa ny vehivavy sy ny fikambanam-behivavy isaky ny distrika sy ny faritra misy azy avy.
FMI/MADAGASIKARA : Fandaharanasa vaovao mandritra ny 3 taona mifanaraka amin’ny PEM ary mamaritra ny firindran’ny toekarena eto amintsika taorian’ny fiatrehana ny COVID-19
Nifarana rehefa naharitra 13 andro, ny dinika nifanaovan’ny FMI sy ny fitondram-panjakana manodidina ny fandaharanasa vaovao iarahana amin’ny tahirim-bola iraisam-pirenena mandritra ny 3 taona. 320 tapitrisa dolara no teti-bidin’izany fandaharanasa FEC izany izay natokana ho an’ireo firenena hitan’ny FMI fa tsara tantana ary mirindra sy miroso amin’ny fanatrarana ny fampiroboroboana ara-toekarena sy mikajy ny lafiny ara- tsosialy. Marihana fa efa nahazo ny antsoina hoe “droit de tirage” isika ny 14 janoary lasa teo ary ny fahavitan’ny dinika sy ny fifandresen-dahatra nahazoana io FEC vaovao io dia manamafy sy manome endrika tsara ny fanohanan’ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny tetikasa ara-toekarena ho an’i Madagasikara. Izany dia narafitra mba hifanaraka sy hifandrindra amin’ny fandaharanasa hoenti-manarina sy manondrotra an’i Madagasikara (PEM). Voalaza mazava tsara ao anatin’izany ny tetika sy ny paika ary ny drafitra politika hitantanana ny hetra, ny trosam-panjakana, ny ady amin’ny kolikoly, ny fangaraharahana eo amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana izay mifanaraka tanteraka amin’ny politika ankapoben’ny fitondram- panjakana.
DIASPORA MALAGASY: Navoaka ny « lettre de politique Nationale »:
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny fampahafantarana nentin’ny Minisitry ny Raharaham-bahiny miompana amin’ny politikam- pirenena hitantanana ny zanaka ampielezana Malagasy maneran-tany na ny antsoina hoe : « Diaspora Malagasy ». Mifototra amin’ny fiarovana sy fifanomezan-tanana amin’ireo zanaka Malagasy ampielezana no isan’ny politika voarafitra amin’izany. Eo ihany koa ny fanomezan-danja ny kolontsaina, ny fomba amam-panao, ny fifanakalozana ara-tsosialy, ara- toekarena ary ny fifaneraserana eo amin’ny sehatra ara-bola. Tafiditra ao anatin’izany ihany koa ny fandraisan’anjaran’ireo zanaka Malagasy ampielezana amin’ny seha-pifidianana izay hirosoana tsikelikely sy ilaina fifampidihana sy fandaminana. Hapetraka ihany koa ny politika hanamafisana sy hamaritana ny fandraisan’anjaran’ny zanaka Malagasy ampielezana eo amin’ny asa fampiroboroboana sy ny fifanaraham-piaraha- miasa mifototra amin’ny ara-toekarena sy ny fampandrosoana aty an- tanindrazana. Haharitra 10 taona ny fanatanterahana ny drafitrasa amin’izany ka hisy ny vaomiera manokana handrafitra sy hanatanteraka ny asa amin’izany.
RANO FISOTRO MADIO ETO ANTANANARIVO SY NY MANODIDINA :
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny fampahafantarana ny lamin’ny tsena hoentina hanantanterahana ny asa fanaovana lava-drano manerana ny toerana 46 eto Antananarivo sy ny manodidina. Vitaina ao anatin’ny fotoana fohy sy haingana ny asa sy ny famatsian-drano izay no isan’ny antony nanomezana ny fahazoan-dalana mikasika ny lamin’ny tsena androany. Ambohidrapeto, Fiombonana, Itaosy, Ampitatafika, Andoharanofotsy, Bongatsara, Alasora, Tsiadana, Ambohimangakely, Ankadikely Ilafy, Sabotsy Namehana, Ambohimanga Rova, Antehiroka, Ivato Firaisana, Anosiala ary Antananarivo Renivohitra no ifotoran’ny asa sy ny fotodrafitrasa amin’ireo fanaovana lava-drano ireo.
FANAPARIAHANA SY FITARIHANA JIRO ETO ANTANANARIVO :
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny fampahafantarana ny
fandefasana ny tolotra manodidina ny fanamafisana ny “Réseaux Interconnecté d’Antananarivo RING TANA 90kv » hahafahana mitsinjara ireo herinaratra ho azo amin’ireo tetikasa toan’i Sahofika, Volobe, Ranomafana, Mahitsy ary ireo herinaratra azo amin’ny angovo azo havaozina. Handraisana ny herinaratra mampifandray an’i Toamasina sy Antananarivo, hampihena ny fahatapahan-jiro lava ary hanome herinaratra ireo toerana vaovao haorina manodidina an’Antananarivo.
DISTRIKA 60 : HISITRAKA INDOSTRIA 60 MIFANARAKA AMIN’NY VOKATRA SY NY FANJIFAN’NY MPONINA ETO AN-TOERANA :
Hisy orinasa ara-indostria madinika sy salantsalany hijoro sy hiorina manerana ny distrika 60 ka hamorona asa ho an’ireo vehivavy, sy fikambanana vonona hihary ary vondron’olona vonona hanatanteraka ny tetikasa. Hijoro amin’izany ireo ozinina kely afaka mamokatra ranom- boankazo, afaka mitoto vary, afaka manodina ny ovy ho karepoka, ny voatabia ho lasa ambifotsy, ny hamokatra sakafo fanjifan’ny mponina andavanandro. Hiteraka asa sy fandrosoana ary fanjifana mivantana ny vokatry ny tany avy amin’ny faritra sy distrika isan-tokony izany. Hisy ny fanofanana eo amin’ny sehatra maro hoenti-mametraka izany. Ny ministeran’ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana no mitarika ny tetikasa, fa miara-mientana kosa ny ministera isan-tokony toy ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny ministera misahana ny angovo sy ny rano, hifandrimbona hametraka izany araka ny toromariky ny Filoham-pirenena izay nampahafantarina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra androany. Io no tetikasa antsoina hoe ODOF io na antsoina koa hoe One District One Factory.
FANAOVANA VAKISINY NY ZAZA :
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny fandaniana mikasika ny famatsiam-bola hoenti-manatanteraka ny fanaovana vakisiny ny zaza Malagasy izay iarahana amin’ny GAVI sy ny UNICEF mitentina 1,8 tapitrisa dolara. Vakisiny iadiana amin’ny raboka, lefankozatra, « DTCHepBHib », areti-tratra, bonibony sy kitrotro, areti-kibon-jazakely.
SAMPAN-DRAHARAHAM-PARITRY NY FITANDROANA NY FILAMINANA ANATINY 02 NO HOSOKAFANA :
Nahazo fankatoavan’ny Filankevitry ny Minisitra ny fanorenana ny toeram-piasan’ny sampan-draharaham-paritry ny filaminana anatiny eo anivon’ny polisim-pirenena, ao amin’ny faritra Matsiatra ambony izay aorina eo amin’ny tanin’ny Somacodis fahiny ao anatin’ny kaominina ambonivohitra Fianarantsoa. Toy izany koa ny fanorenana ny toeram-piasan’ny sampan- draharaham-paritry ny filaminana anatiny etsy Ivato izay tokony arafitra sy aorina eo amin’ny toerana iorenan’ireo building manarapenitra etsy amin’ny kaominina Ivato ato anatin’ny faritr’Analamanga.
Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy :
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny didim-panjakana mamaritra ny tombontsoa iombonana ka nametrahana ny filan’ny fanjakana toerana manemitra ny fari-dalana Masay-Ambodivona izay hanaovana asa ato anatin’ny tananan’Antananarivo Renivohitra faritra Analamanga.
Araka ny tolo-kevitry ny Filohan’ny Repoblika:
Ny Jeneraly ANDRIAMANALINARIVO Voahangy dia voatendry ho Tale Jeneralin’ny ANAF.
Atoa MANAKANY Yvan Thierry, dia voatendry ho Tale Jeneralin’ny « Nouvelles Villes et du Logement ».
Ramatoa RAMAHERY Hanitsoa Ravo, dia voatendry ho Tale misahana ny « Développement des Nouvelles Villes ».
Atoa RAKOTONAVALONA Rivomalala, dia voatendry ho talen’ny « Programme Elargi de Vaccination ».
Ramatoa RAMAMONJISOA Christiane Bodohanta, dia voatendry ho talem-paritra ao Betsiboka.
Atoa RAJAONARISON Tolojanahary, dia voatendry ho Talem-paritra ao Matsiatra Ambony.
Atoa RALEMARY Nicolas William, dia voatendry ho Talem-paritra ao Atsimo Atsinanana
Ramatoa HOASY Solange, dia voatendry ho talem-paritra ao Boeny.
Atoa HELMIE Eugenio dia voatendry ho Tale Jeneraly ad intérim ao amin’ny « Laboratoire des Mines de Madagascar ».
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa- Tanana :
Ramatoa RAJAONARISON Adonia Denisse, dia voatendry ho Talem- paritra ao Analanjirofo.
Ny Filankevitry ny Minisitra dia nanafoana ny didim- panjakana manaraka ity:
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Asa, ny fampanan’asa, ny asam- panjakana ary ny Lalàna Sosialy:
Foana ny didim-panjakana mitondra ny laharana 2019-1176 tamin’ny 06 jona 2019 nanendry ny Tale misahana ny « Réforme de la Fonction Publique »
Natao androany faha 17 Febroary 2021
NAHAZO « LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL » VAOVAO ANTSIRANANA